I-Apple TV 4K ku-SoC A12 Bionic chip nangesilawuli kude esingajwayelekile | TeraNews.net
I-Apple TV 4K ku-SoC A12 Bionic chip nange-remote control engajwayelekile
umbhali Nikitin Eugenius Kushicilelwe ku 21.04.2021
Ukumenyezelwa kwe-Apple TV 4K set-top box kuhambe buthule kunganakwa. Umkhiqizi akazange ancome umkhiqizo wakhe omusha, edlulisela le ndima kubalandeli bomkhiqizo. Abathengi abaningi kuphela abasabele ngokumangazayo kulesi simemezelo.
I-Apple TV 4K ku-SoC A12 Bionic
Kungcono ukuqala nge-A12 Bionic SoC, enika amandla ama-smartphones e-iPhone XR ne-XS. Abathengi babuze ukusebenza kwe-chip futhi baqala ukubhala izikhalazo kumenzi.
Eqinisweni, akuyona yonke into embi njengoba kubonakala. Futhi, kunalokho, le chip inamandla amakhulu nge-TV-BOX. Ibhokisi le-set-top, uma liqhathaniswa ne-smartphone, lidinga ukusebenza okuncane. Futhi nakuSoC A12 Bionic, yonke imidlalo ye-TOP izondiza kuzilungiselelo eziphezulu.
Ngendlela, umenzi umemezele ukusekelwa kweDolby Vision ngezinga lohlaka lwama-fps angama-60. Futhi, mayelana nesinqumo se-4K ngokuxhaswa kwe-High Frame Rate HDR (Ibanga Elinamandla Eliphezulu). Okusho ukuthi, kwi-smartphone ye-iPhone 12, ungadubula ividiyo ngezilungiselelo ezisezingeni eliphakeme. Futhi ku-TV ye-4K, ngokusebenzisa ibhokisi lokusetha phezulu, bukela okokusebenza kwevidiyo ngekhwalithi yangempela.
I-Apple TV 4K: iSiri Remote esezingeni eliphezulu
Irimothi ibukeka ingajwayelekile, kepha ukusebenza kusezingeni eliphakeme. Izinkinobho ezithandwa kakhulu zikuphaneli yedivayisi. Konke okunye kushintshiwe ngokulawulwa kwezwi. I-Siri ayisekelwa kuwo wonke amazwe emhlabeni jikelele, kepha i-Apple isebenza ngokuhlanganisa.
Ibhokisi le-Apple TV 4K 2021 ligijima ku-tvOS. Ngokuzenzakalelayo, i-TV-Box yakhe i-Apple TV +, i-Apple Music, i-Apple Fitness +, i-Apple Arcade ne-AirPlay. Ukudideka kancane ngamanani:
Intengo ye-Apple TV 4K eno-32 GB we-RAM ingu-$179.
Intengo ye-Apple TV 4K eno-64 GB we-RAM ingu-$199.
I-Siri Remote ibiza ngokwehlukana ngama- $ 59.
Kukhona inketho yokuthenga i-Apple TV HD eyedlule ngeSiri Remote nge $ 149.
I-TV-box X10 MAX Plus 4/64 ku-AMLOGIC S905X3
I-Apple Arcade inikeza imidlalo emisha esitolo sohlelo lokusebenza
I-AntMiner A3 Siacoin: ukuqala kwezimayini ze-SIA